निर्वाचन सुरक्षा प्रभावकारी भएन : निर्वाचन आयोग – Nepal Journal
निर्वाचन सुरक्षा प्रभावकारी भएन : निर्वाचन आयोग
Posted By: Nepal Journal June 19, 2017 | ५ असार २०७४, सोमबार १५:३५
काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले दोस्रोचरणको निर्वाचनकालागी सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सरकारसंग माग गरेको छ । सुरक्षा व्यवस्था चुस्त नहुँदा मनोनयन दर्ताको क्रममा आइतवार हिंसाका घटना घटेको आयोगको निष्कर्श छ ।
आज बसेको आयोग बैठकले उम्मेदवारी मनोनयनको क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाप्रति खेद प्रकट गर्दै राजनीतिक दलहरुलाई सम्यामता अपनाउन अपिल समेत गरेको छ ।
मनोनयन दर्ताको दिन आईतवार बिभिन्न स्थानमा भएको हिंसाका घटनाले निर्वाचनको वातावरण बिग्रन सक्ने भन्दै आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
बैठकले बाजुरा जिल्लाको छेडेदह गाउँपालिका वडा नं. ५ डोगडीमा एमाले कांग्रेस कार्यकर्ताबिचको झडपमा मारिएका हंसबहादुर राउतप्रती समवेदना प्रकट गर्दै घाईतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरेको छ ।
त्यस्तै आयोगले कपिलवस्तुको बाडगंगा नगरपालिका वडा नं. ४ मा बम विष्फोट गराइएको घटनाको निन्दा गरेको छ । आयोगका प्रवक्त सुर्य प्रसाद शर्माद्धारा जारी विज्ञप्तिमा बिस्फोटमा घाईते भएकाहरुको शीघ्र्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै निर्वाचन शान्तिपुर्ण रुपमा सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त रहन सबै पक्षसंग आग्रह गरिएको छ ।
Be the first to comment on "निर्वाचन सुरक्षा प्रभावकारी भएन : निर्वाचन आयोग"